होलीमा अपनाऔँ सावधानी, कुन रङको के हानि ? – Health Post Nepal
होलीमा अपनाऔँ सावधानी, कुन रङको के हानि ?
२०७६ फागुन २६ गते १३:४४
धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वसँग जोडिएको पर्व होली अर्थात् फागुपूर्णिमालाई रङको पर्व पनि भनिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा परम्परागततवरले तयार पारिने वनस्पतिजन्य रङको प्रयोग गरेर खेलिन होलीको स्थान अहिले विभिन्न रासायनिक तत्वमिश्रित रङहरूले लिने गरेका छन् । व्यावसायिक मुनाफाका लागि रासायनिक तत्वहरूबाट रङ बनाइनु र गाढा रङ निकाल्न स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्वहरूको प्रयोग गरिनुले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरेको छ ।
हानिकारक रङको अत्यधिक प्रयोगले तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य असर निम्त्याउने गर्छ । रासायनिक तत्वयुक्त रङको प्रयोग छाला, आँखा, श्वासप्रश्वास, मिर्गौलासम्बन्धी गम्भीर रोगको मात्र नभएर क्यान्सरको समेत कारण बन्ने गरेको जनाउँदै चिकित्सकहरूले होलीमा स्वास्थ्य सावधानीका लागि सचेत गराउने गरेका छन् ।
प्राकृतिक रङहरूको प्रयोग गरेर मनाइने सांस्कृतिक पर्व होलीमा पछिल्ला दिनमा कडा र बढी रसायन मिसाइएका रङ, फोहोर र लोलाको प्रयोग बढ्दो छ । रङ तथा फोहोर पानीको प्रयोगले शरीरमा छालालगायतको समस्या बढी देखिने र लोलाले आँखामा चोट, कानको जाली फुट्नेसम्मका समस्या निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
९० प्रतिशत घुलनशील रङ बनाउँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने डाईहरूको प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सुक्खा रङ तयार पार्न सिसा, मर्क्युरी, पेट्रोलियम प्रोडक्टजस्ता स्वास्थ्यका लागि भयावह हुने तत्वहरूको प्रयोग गरिन्छ । यो मिलावटी रसायनहरूको स्वास्थ्यमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव छ ।
जानकारहरूका अनुसार ९० प्रतिशत घुलनशील रङ बनाउँदा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने डाईहरूको प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सुक्खा रङ तयार पार्न सिसा, मक्र्युरी, पेट्रोलियम प्रोडक्टजस्ता स्वास्थ्यका लागि भयावह हुने तत्वहरूको प्रयोग गरिन्छ । यो मिलावटी रसायनहरूको स्वास्थ्यमा गहिरो नकारात्मक प्रभाव छ ।
वीर अस्पतालकी चर्मरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा कार्कीका अनुसार होलीपछि अस्पतालको चर्मरोग विभागमा छालाका समस्या लिएर आउनेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्छ । विभिन्नखालका रसायनयुक्त रङको प्रयोगले सुरुमै छाला चिलाउने, फुस्रो हुने बिबिरा निस्किने, पोल्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् । ‘एलर्जी बढ्दै जाँदा छाला फुल्नुका साथै अनुहारको रङ डढेजस्तो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सुक्खापन बढ्दै जाँदा दादमा समेत परिणत हुन सक्छ ।’
डा. कार्कीका अनुसार बालुवा र सिसाको प्रयोग गरिएको खस्रो अबिरले नरम छालामा घाउसमेत बनाउँछ । ‘रातो दाग, दाद वा अन्य समस्या भएका छालाका बिरामी छन् भने त रोग झन् बढ्छ,’ उनले थपिन् ।
रङहरूमा एस्वेस्टस, सिलिकाजस्ता तत्वहरू पनि मिलाइएका हुन्छन् । यी तत्वहरूले आँखा र छालाको संक्रमण गर्नुका साथै दम, खोकीजस्ता रोगहरूलाई जन्म दिन्छ । सस्ता सामग्रीबाट रङ बनाउनका लागि पेट्रोलियम उत्पादन, डिजल इन्जिन तेल, सिसाको धुलो हाल्नाले छालाको संक्रमण, रगतको संक्रमण, मिर्गौलाको संक्रमण, कलेजो, मस्तिष्क, आँखाजस्ता कोमल अंगहरूको दुर्बलता र फेलियर हुने टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या देखापर्छन् ।
होलीका दिन बलपूर्वक रङ दल्ने र लोला हान्ने प्रवृत्ति तथा मदिरा सेवनपछि सवारी चलाउने र झैझगडाका कारण अस्पतालका आकस्मिककक्षहरूमा दुर्घटना र चोटपटकका बिरामीसमेत बढ्ने गर्छन् । तिलगंगा आँखा अस्पतालका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रुइत सैँजूका अनुसार होलीको दिन र पछि पनि आँखाका बिरामी बढ्ने गरेका छन् ।
यसैगरी घुलनशील रङहरूमा प्रायः जेनसियन भायोलेट भन्ने विषाक्त तत्व मिलाइएको हुन्छ । जेनसियन भायोलेट छालाका लागि संक्रामक केमिकल हो । यसले छाला चिलाउने एजर्जी हुने, फोकाफोकी आउने, छालाको रङ खुइलिने, डर्माटाइटिसजस्ता समस्या निम्तिने हुन सक्छ ।
उनका अनुसार होली र तिहारका मौसममा आँखाका आकस्मिक बिरामी आउने दर बढ्छ । डा. सैँजूका अनुसार लोलाको प्रयोगले आँखाको नानीका डिलहरू च्यातिने केस बढी आउँछ । उनले रसायनको प्रयोगले केमिकलका कारण आँखा पाक्ने रोग (केमिकल कन्जेटिभाइटिस)को समस्या हुन्छ । ‘होलीपछि आँखा रातो हुने, पाक्ने, सुन्निने केस ठूलो संख्यामा आउँछ,’ उनले भने, ‘यसको प्रमुख कारण रङको प्रयोग हो ।’
डा. कार्कीका अनुसार कमसलखालका सौन्दर्यवर्धक सामग्रीमा मिसाइने हानिकारक रसायनको प्रयोगले छालाबाट प्रवेश गरेर भित्रसम्म पुगेर असर गर्ने प्रमाणित भइसकेको हुनाले रङहरूमा पनि कडा केमिकल मिसाइएमा त्यसले भित्री अंगहरूमा समेत प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । चिकित्सकका अनुसार गर्भवती महिलामा भने कालो रङको बढी असर हुन्छ ।
होलीमा हानिकारक रङहरूको प्रयोग नगर्न र प्राकृतिक ‘हर्बल’बाट होली खेल्न चिकित्सकको सुझाब छ । होली खेल्नुअघि नरिवल वा जैतुनको तेलको प्रयोग गरेमा रङको असरलाई कम गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ ।
(गत वर्ष होलीपर्वका अवसरमा प्रकाशित यो चेतनामूलक सामग्रीको आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिकता महसुस गरी पुनः प्रकाशन गरिएको हो)